2 Samuel 18 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
18 Na Dawid kan nnipa a wɔka ne ho no, na ɔde apem apem so mpanyimfo ne ɔha ha so mpanyimfo sisii wɔn so.+ 2 Afei Dawid kyɛɛ nnipa no mu akuw abiɛsa+ de biako hyɛɛ Yoab+ nsa, na ɔde biako hyɛɛ Seruia ba Abisai,+ Yoab nua+ no nsa, na ɔde biako nso hyɛɛ Gatni Itai+ nsa. Na ɔhene ka kyerɛɛ nnipa no sɛ: “Me nso mefi adi ne mo akɔ.” 3 Nanso nnipa no kae sɛ: “Mfi adi nkɔ bi,+ na yɛn de, sɛ ɛba sɛ yeguan a, ɛrenyɛ wɔn asɛm.+ Sɛ mpo yɛn mu fã wu a, ɛrenyɛ wɔn asɛm, na wo de, wote sɛ yɛn mu mpem du,+ enti eye mmom sɛ wubefi kurow no mu adi aboa yɛn.”+ 4 Ɛnna ɔhene ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Nea ɛteɛ mo ani so biara no, mɛyɛ.”+ Na ɔhene gyinaa kurow pon+ no nkyɛn maa nnipa no nyinaa fii adi, ɔha ha ne apem apem so, kɔe.+ 5 Na ɔhene hyɛɛ Yoab ne Abisai ne Itai sɛ: “Mo ne aberante Absalom nni no brɛbrɛ+ mma me.” Bere a ɔhene de Absalom ho ahyɛde no rema asahene no, nnipa no nyinaa tee. 6 Na nnipa no siim kɔɔ wuram kohyiaa Israel, na wɔkɔɔ ɔko no wɔ Efraim kwae mu.+ 7 Ekowiei sɛ Israel dɔm+ no dii nkogu+ wɔ Dawid nkoa no anim, na nnipa a wɔtotɔe saa da no dɔɔso kɛse, mmarima mpem aduonu. 8 Na ɔko a wɔkoe wɔ hɔ no trɛw kɔɔ asase no ani baabiara. Bio nso, nnipa a kwae no kunkum wɔn saa da no dɔɔso sen nnipa a nkrante kunkum wɔn. 9 Eduu baabi no, Absalom kopuee Dawid nkoa no anim. Saa bere no, na Absalom te afurumpɔnkɔ bi so, na afurumpɔnkɔ no kɔfaa dua kɛse bi mmaa kusuu ase, na ne ti kosoo dua kɛse no mu ma ɔsensɛn soro a ne nan nka fam,+ na afurumpɔnkɔ a ɔwɔ n’ase no sen kɔe. 10 Ɔbarima bi kohui, na ɔkɔka kyerɛɛ Yoab+ sɛ: “Hwɛ! Makohu Absalom sɛ ɔsɛn dua kɛse bi so.” 11 Ɛnna Yoab ka kyerɛɛ ɔbarima a ɔkaa asɛm no kyerɛɛ no no sɛ: “Sɛ wuhui de a, dɛn nti na woammɔ no anhwe fam wɔ hɔ? Anka mede nnwetɛbona du ne abɔso betua wo ka.”+ 12 Nanso ɔbarima no ka kyerɛɛ Yoab sɛ: “Sɛ wokari nnwetɛbona apem mpo gu me nsam a, merenteɛ me nsa nka ɔhene ba no, efisɛ yɛn asom na ɔhene hyɛɛ wo ne Abisai ne Itai sɛ, ‘Obiara nhwɛ yiye na biribi anyɛ aberante Absalom.’+ 13 Anka me na mayɛ ne kra bɔne; nso anka asɛm no renhintaw ɔhene,+ na wo nso anka wobɛtwe wo ho agyina nkyɛn.” 14 N’ano sii no, Yoab kae sɛ: “Merentwentwɛn me nan ase w’anim bio!” Ɛnna ɔfaa mpɛmɛ abiɛsa hyɛɛ ne nsam, na ɔkɔtow wɔɔ+ Absalom komam wɔ dua kɛse no mu+ bere a nkwa da so wɔ ne mu no. 15 Na mmerante du a wokura Yoab akode baa Absalom ho bɛbɔɔ no kum no.+ 16 Ɛnna Yoab hyɛn abɛn,+ na nkurɔfo no nyinaa san fii Israel akyi; ná Yoab asianka nnipa no. 17 Afei woyii Absalom de no kɔtoo amoa kɛse bi mu wɔ kwae mu hɔ, na wɔboaboaa abo pii ano guu no so.+ Na Israel nyinaa guanee ma obiara kɔɔ ne fie. 18 Bere a Absalom te ase no, ɔfaa edum bi de tim hɔ,+ Ɔhene Bon+ mu, na ɔkae sɛ: “Minni ɔbabarima biara a wɔde no bɛkae me din.”+ Enti ɔde ne din too edum no so,+ na wɔafrɛ no Absalom Nkaedum de abesi nnɛ. 19 Sadok ba Ahimahas+ de, ɔkae sɛ: “Ma mintu mmirika nkɔbɔ ɔhene amanneɛ, efisɛ Yehowa abu atɛn agye no afi n’atamfo nsam.”+ 20 Nanso Yoab ka kyerɛɛ no sɛ: “Ɛnyɛ wo na wobɛkɔ akɔbɔ amanneɛ nnɛ, da foforo na wobɛkɔ akɔbɔ amanneɛ; ɛnnɛ de, ɛnyɛ wo na wobɛkɔ akɔbɔ amanneɛ no, efisɛ ɔhene ankasa ba na wawu.”+ 21 Afei Yoab ka kyerɛɛ Kusni+ no sɛ: “Kɔ na kɔka nea woahu kyerɛ ɔhene.” Ɛnna Kusni no kotow Yoab, na osoo mmirika mu. 22 Afei Sadok ba Ahimahas san ka kyerɛɛ Yoab sɛ: “Ma nea ɛbɛba biara mmra, ma me nso mintu mmirika nni Kusni no akyi.” Nanso Yoab kae sɛ: “Me ba, dɛn nti na wopɛ sɛ wutu mmirika kɔ bere a amanneɛbɔ biara nni hɔ?” 23 Ɔsan tii mu bio sɛ: “Ma nea ɛbɛba biara mmra, ma mintu mmirika nkɔ.” Enti ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Tu mmirika kɔ!” Na Ahimahas soo mmirika mu kɔfaa Ɔmantam+ kwan no so, na okotwaa Kusni no ho. 24 Ná Dawid te kurow apon+ abien no ntam. Ná ɔwɛmfo+ no kɔ kurow pon no atifi dan mu, ɔfasu no so. Akyiri yi, ɔmaa n’ani so hwɛe, na hwɛ! ɔbarima bi a ne nko nam de mmirika reba. 25 Enti ɔwɛmfo no teɛɛm ka kyerɛɛ ɔhene, na ɔhene kae sɛ: “Sɛ ne nko na ɔnam a, ɛnde asɛm wɔ n’ano.” Na ɔbae ara, na nkakrankakra, ɔbɛn hɔ. 26 Afei ɔwɛmfo no huu ɔbarima foforo sɛ ɔde mmirika reba. Enti ɔwɛmfo no teɛɛm ka kyerɛɛ ɔpon ano hwɛfo no sɛ: “Hwɛ! Ɔbarima foforo a ne nko nam de mmirika reba.” Ɛnna ɔhene kae sɛ: “Ɔno nso sõ nkra.” 27 Na ɔwɛmfo no kae sɛ: “Sɛnea mihu nea odi kan no mmirikatu no te sɛ Sadok ba Ahimahas+ mmirikatu.”+ Ɛnna ɔhene kae sɛ: “Ɔyɛ onipa pa+ enti ɛbɛyɛ sɛ asɛmpa+ na ɔde nam.” 28 Ɛnna Ahimahas teɛɛm ka kyerɛɛ ɔhene sɛ: “Asomdwoe mu!” Na ɔkotow ɔhene de n’anim butuw fam. Na ɔtoaa so sɛ: “Nhyira nka+ Yehowa wo Nyankopɔn efisɛ nnipa a wɔmaa wɔn nsa so hyɛɛ me wura ɔhene no, wayi wɔn ahyɛ wo nsa.”+ 29 Nanso ɔhene bisae sɛ: “Aberante Absalom ho ye anaa?” Ɛnna Ahimahas kae sɛ: “Bere a Yoab somaa ɔhene somfo ne wo somfo no, mihuu kitikiti kɛse bi, nanso na minnim asɛm ko.”+ 30 Na ɔhene ka kyerɛɛ no sɛ: “Sen kogyina nkyɛn ha.” Ɛnna okogyinaa nkyɛn dinn. 31 Na hwɛ, Kusni+ no bedui, na Kusni no kae sɛ: “Me wura ɔhene ntie amanneɛ a ɛwɔ hɔ, efisɛ Yehowa abu atɛn ama wo nnɛ ayi wo afi wɔn a wɔsɔre hyɛɛ wo no nyinaa nsam.”+ 32 Nanso ɔhene bisaa Kusni no sɛ: “Aberante Absalom ho ye anaa?” Na Kusni no kae sɛ: “Ma me wura ɔhene atamfo a wɔsɔre hyɛɛ wo a wɔpɛ wo bɔne nyinaa nyɛ sɛ aberante no.”+ 33 Na asɛm no haw ɔhene, na ɔforo kɔɔ kurow pon no atifi dan+ no mu, na otuee sũ mu. Na ɔrekɔ nyinaa na ɔreka sɛ: “O me ba Absalom, me ba yi,+ me ba Absalom! Anka me mmom minwu, anka minsi w’ananmu, Absalom, me ba yi, me ba yi!”+